Qofka qaadanaya Aqoonsiga ma looga baahan yahay in lagu sawiro Face Mask? - Awdinle Online
Qofka qaadanaya Aqoonsiga ma looga baahan yahay in lagu sawiro Face Mask?
Dood adag ayaa ka dhalatay Go’aan maamulka California ku gaaray in ruqsadda wadarista Gawaarida loo sameeyo Gabar 25-sano jir ah oo lagu magacaabo Lesley Pilgrim iyada oo xiran Marada Afka & sanka daboosha (Face Mask).
Dadka ayaa is weydiinaya sida loola loogu ogolaanayo qofka in ruqsadda (License) ama Aqoonsiga (ID Card) loogu dhejiyo sawirkiisa isaga oo aan si dhammeystiran wajigiisa loo arkeen una xiran Marada Af & Sanka daboosha Face Mask).
Labo sawir oo lasoo bandhigay waxaa ka muuqda labo midab oo kala duwan oo afka ugu xiran, taasi waxa ay meesha ka saareysaa in nuuc gaar ah loo go’aamiyo Dadka doonaya qaadashada aqoonsiyada iyada laga feejigan yahay faafitaanka Covid-19.
Teleefishinka Mareykanka laga leeyahay ee CNN ayaa sheegay in dad badan ay is weydiinayaan arrintaan, maadaama adeeg qabtayaasha aysan fasax u heysan in dadka ay ka bixiyaan Face Mask oo haddii uu sidaas sameeyo dambi ku noqoneysa.
“Waxa ay ila tahay waa wax saxan, mana jirin hab kale oo aan ku helayo sharciga ama aqoonsiga, keliya Ruqsadda kuma sameysan ee waxa aan sawirkaan ku qaatay Caddeynta Federaalka & tan shaqsiga” Sidaasi waxaa CNN u sheegtay Lesley Pilgrim.
Previous articleDowladda Soomaaliya oo ka hadashay Magacaabista Madaxa hey’adda caalamiga ah ee Maaliyadda
Next articleXOG: Guddoomiyaha Baarlamaanka Puntland oo looga yeeray Nairobi